Wasaaradda Arrimaha Dibbada Ethiopia oo u yeertay Safiirka Maraykanka -
Home News Wasaaradda Arrimaha Dibbada Ethiopia oo u yeertay Safiirka Maraykanka
Wasaaradda Arrimaha Dibbada Ethiopia oo u yeertay Safiirka Maraykanka
Mr Gedu ayaa hoosta ka xariiqay inay marin-habaabin tahay wararka sheegaya in biya-xireenka uu hakinayo qulqulka biyaha wabiga Nile.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sidoo kale waxaa wax aan la aqbali Karin ku tilmaamay in madaxwayne Mareykan ah oo xil haya uu huriyo colaad dhexmarta Masar iyo Itoobiya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa dhanka kale u sheegay safiirka Mareykanka in Itoobiya aysan waligeed ka baqin hanjabaad ka dhan ah madaxbanaanideeda, islamarkaana ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wadaxaajoodka ay gar-wadeenka ka yihiin midowga Afrika.
Mar sii horreysay ria’sul wasxaaraha dalka Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisa uusan u dulqaadan doonin daandaansi ama gardaro noocey doonto ha ahaa ka dib markii madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Masar ay burburin karto biya-xireenka ay Itoobiya ka dhistay wabiga Nile.
Mr Abiy Ahmed si toos ah ugama jawaabin hadalka Trump, balse waxaa muuki shaki ah waxa ku kalifay Mr Trump hadalka uu sheegay.
Dr Abiy ayaa wacad ku maray in Itoobiya ay dhameystiri doonto Biya-xireenka. “Itoobiya isma dhiibi doonto gardara noocey doonto ha ahaatee,” ayuu yiri Abiy Ahmed.
“Itoobiya waligeed jilbaha uma dhigan oo ma adeecin cadowgeeda, balse waxay xushmeysaa saaxibadeed, ma sameynayno maanta mustaqbalkana ma sameyn doono.”
Previous articleGolaha Deegaanka Gaalkacyo oo doortay Duqa Magaalada iyo ku xigeenkiisa
Next articleFrance recalls ambassador from Turkey after ‘unacceptable’ Erdogan comments